CINAB DUNAV: SHARAXAADA KALA DUWAN IYO SAWIRKIISA, MUUQAALADA IYO ASTAAMAHA - BEERTA
Waxyaabaha kala duwan ee ganacsiga - Cinabta Dunav
Dunav kala duwan Dunav waxaa lagu magacaabaa ka dib Danube (magaca Bulgarian waa magaca "Dunav"). Kala duwan ayaa sidoo kale loo yaqaan Dunov iyo Miracle of Bulgaria.
Winegrowers tixgeliyaan Miracle of Bulgaria ah noocyada kala duwan ee canab ganacsi fiican.: Sida uu sifooyinka, isaga oo aan ka hooseeya Cardinal wax kasta oo aan dhadhamin.
Dunav sharaxaad kala duwan
Mucjiso Bulgaariya - madoow canab guduud mugdi ah.
Noocyada guduudan waa sidoo kale Cardinal, Graf Monte Cristo iyo Victor.
Ma aha xilli hore, laakiin hore u daadi: tani waxay u baahan tahay ugu badnaan 125 maalmood. Goosashada labaad - Sebtembar - Oktoobar (koonfurta).
Dhalinyaro Dunava aad u koraan, caleemaha si fiican u bislaadaan. Miisaanka celceliska farabadan canabku waa 0.6 kilo. Waxaa jira kooxo 1.5 kilo ah. Foomka ay ku leeyihiin qaab shaaha ah, cufnaanta waa celcelis ahaan.
Kooxuhu waa kuwo waaweyn, qurux badan, bandhigid. Inta badan miro ayaa leh miisaan ka badan 8 garaam, qiyaastii 3 cm dheer, 2 cm ballaaran. Haddii aadan ku soo aruurin muddo dheer, waxay helayaan nacnac madow, leexiyo berrito ama madow.
Agat Donskoy, Strasensky iyo Valery Voevoda ayaa sidoo kale ku faani kara kooxo waaweyn.
In ka badan kala badh caleemaha duurka miraha. Sawir kasta 1 - 2 kooxood.
Dunav (Miracle of Bulgaariya) - Isku-duubnaanta iskudhafka ah ee iswiidhishka ah, waxaa lagu helaa saddex nooc: Balkan, Ribi Mekhura iyo Cardinal. Nimcaan Dunav Nedyalka Matevska iyo Mincho Kondarev 1966.
Marka hore, waxay u gudbeen Balkanka leh Ribi mehr, ka dibna isbarbardhiga la soo jeediyey - oo leh Cardinal. Dunav waxaa lagu daray liiska Boqortooyada ee 1997 ee noocyada kala duwan ee canabka.
Goosashada Dunava waxay si joogto ah u saraysaa - ugu yaraan 130 sentimitir halkii hektar.
Dhadhanka berry waa mid isku mid ah, waxaa jira qoraallo yaryar oo yar. Dareemka weyn waxaa sidoo kale muujiya Velika, Ruta, Princess Olga iyo Chocolate.
Canab sonkorta ayaa u dhexeysa 16 ilaa 21 boqolkiiba. Cajirka ah ee berry waa wax yar oo dheellitiran - laga bilaabo 5 ilaa 7 g / l.
Dhibcaha dhadhanka canabka bislaaday Miracle of Bulgaariya, oo kaliya ka soo bateen baadiyaha, sare (8.2 dhibcood): berry crispy, cufan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad jarjartey si degdeg ah ka dib markii dheehid, taas oo ah, ku dhowaad 10 maalmood ka hor inta ay Bisaylkiisa, dhadhanka berry ka xun yahay.
Beergooyinku waxay u dulqaadanayaan gaadiidka dheer (kuwa xardheylaha ah: "xitaa bacaha ayaa qaadaya"), cirbadaha ma dhicin. Heerkulka ugu sareeya ee canabka ah ee lagu kariyo canabkeedu waa 20 darajo Celsius.
Dunav koraan growers badan, sababtoo ah miraha kala duwan tan hore, berry, casaan iyo ballaadhan, muuqaal soo jiidasho leh iibsadaha.oo dhadhankuna ma dayrin karo. Koonfurta, waxay ku dhawaad ​​10 -15 Agoosto. Canab bislaado ku dheggan duurka muddo dheer, iyada oo aan crack.
Mucjisada Bulgaariya ee beeralayda badanaa waxaa soo iibsada kuwa warshadaha.
Diiday faa'iidada ugu weyn ee Dunava:
maaha inay u jajabiso;
maaha dhibaato la xiriirta gaadiidka;
wuu ka boodaa baadiyaha;
2 - 3 marxaladood goosashada;
Kooxaha ayaa xitaa, cufnaanta caadiga ah;
noocyo kala duwan oo la saadaalin karo, aan qabyo ahayn, sannadka sanadka ka dib wuxuu siinayaa dalag xasilloon;
Dunav waxay cuni karaan sonkorowga.
Cunto kala duwan:
maaha abaar u adkaysta;
u nuglaanta xagta;
uma dulqaadanayo dhaxan (hoosta 20);
Dhirta Dunav - Miracle of Bulgaria, si dhexdhexaad ah u adkaysata cudurada. Badanaa waxaa u nugul caabuqa fayrasta fungal.
Iyada oo adkayn adag, wuxuu badanaa ku leeyahay jeexdo. (marka la eego dhibcaha - 3.5), ayaa saameeya oidiyum (dhibcood - 2 dhibcood). Fungus on canab ayaa u muuqda, sida caadiga ah ka dib markii qabow qabow, markii ay roobabku badanaa ku dhacaan iyo subaxdii qabow qabow ku dhaco.
Waxaad ku daaweyn kartaa duurka sidan oo kale: Bishii Maajo, ku buufin Ridamil, ka dib nus bil ah oo diyaargarow ku jira bakoor (tusaale ahaan, Oxyhoma), iyo nuska bilood ka dib, ku celceli meydhinta daawo naxaas leh (waxaad isticmaali kartaa mid kale, tusaale ahaan, Ordan).
Ka dib goosashada, dib u codso Ridamil. Ka hortagaan xagta iyo oidiyum, iyo sidoo kale ka hortagga muuqaalka kallana wuxuu noqon karaa, bixinta duurka oo leh iftiin wanaagsan iyo hawo qaadasho.
Sidoo kale ma nihin inaan iska dhaafno ka hortagga cudurrada sabiibta ee caadiga ah sida anthracnose, bakteeriyada, chlorosis, rubella iyo kansarka bakteeriyada. Waqti qaadashada, waxay ku caawin doonaan in ay ilaaliyaan labada dhirta iyo goosashada.
Buundada waxaa loo sameeyey vyshomoshtambovo. Geedka canjiga ah ee kudartay 8-indho. Geedka xididdada si fiican. Miraha waxay u muuqdaan dhowr sano. Fadhi Dunav waa inuu ku jiraa qorrax buuxa. Warshad waa qoyaan-jecel, jecel yahay carrada nafaqo leh. Si loo for geedka canabka ah si fiican u bislaadaan iyo sonkorta ku urursatay berry, Bacriminta leh fosfooraska iyo potassium ayaa si nidaamsan loo dabaqay ciidda.
Dunav waa nooc caleemo suuq ah: soo noqodka duurka waa ballaaran (1 baadiyaha - ugu yaraan 30 kiilo), kooxo leh dhoobo qurux badan.Dhimashadiisa waa mid fudud. The berry ma aha mid macaan, laakiin iyada oo aan acidity xoog leh. Waa caddaalad ah in la yiraahdo ma aha in qof kastaa uu jecel yahay dhadhanka Dunawa sababtoo ah fududeyntiisa. Lovers of miro berry, ayuu dhif u jecel yahay. Laakiin, sida ay yiraahdaan, dhadhanka iyo midabka ... Iyo noocyada kala duwan ayaa leh faa'iidooyin badan.